Tokony hahalala ireo zavatra ireo eo anatrehan'i mividy E-skateboards - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Inona no fanontaniana tokony hodinihina? Mazava ho azy fa ny Safety. Noho izany, dia Koowheel herinaratra skateboards mpamatsy efa nahazo taona, RoHS, FCC UN38.3 mari-pankasitrahana. Toy ny fiara na bisikileta, ireo jiro koa skateboards tsara anefa tokony ho hatrany amin'ny-fikasana mihazakazaka malama. Raha mety tsy mitady izay toy ny jiro rehetra skateboards izay efa nahita ka mandraka ankehitriny. Hevitra io ihany koa ankehitriny ny olana mihatra na dia toy ny skateboards, mamela skaters hanao zavatra sasany izy ireo tsy afaka amin'ny birao ara-dalàna, toy ny mitaingina manatrika ilay havoana. By izao aho fa Hianao efa tsaina fa skateboard manokana dia manana maotera kely ao anatiny izany. Vatoaratra, Na izany aza, toa Na izany aza ho mametra mahatonga ny ankamaroan'ny lamaody herinaratra skateboardteti-dratsy. Mialoha, mpanjifa izay nahita fa ny herinaratra skateboard ho manohitra ny lalàna mba handeha eny an-dalambe nanafoana ny preorder. Roto-tarika skateboard mpamatsy ( Koowheel marika) milaza tena ho ny mampirehitra, mifady hanina, ary ny ankamaroan'ny herinaratra skateboard ambony eto an-tany. Eto isika dia manome anao soso-kevitra vitsivitsy mba mampiasa herinaratra skateboards fahizay.
Misy ny sasany tena mangatsiatsiaka herinaratra skateboards eny an-tsena sy ny vitsivitsy amin'izy ireo no tena Nahay mivoatra. Misy skateboards. Range - Raha eran'i Boligaria mba miasa na ny sampam-pianarana fotsiny ianao maka folo minitra dia tokony tsy misy olana izany satria ny ankamaroan'ny skateboards afaka handrakotra izany amin'ny vidiny iray. Miorina roa pals mpikorisa an-dranomandry, izay efa tapa-kevitra ny hanome ny tsara indrindra skateboard herinaratra eto amin'ity tany ity, Koowheel Boards ireo mpitarika ao amin'ny sehatry ny herinaratra skateboards. Ity birao no Mahagaga araka ny tokony ho eo amin'ny lalambe eny-tanety, manazava ny olana fa tsy zana-kazo isan-karazany na dia manonofy ny mora foana. Raha ny mahazatra dia fihenana lehibe iray kv maotera Aoka izay, dia amin'ny raharaha sy ny havoana climes tena araka ny tokony ho ary ny safidy mora vidy kokoa. Inona no tsy maintsy mandinika aloha noho ny miantsena ho an'ny iray? io no haingana indrindra herinaratra skateboard , dia tena malemy fanahy ihany koa. Ahoana no afaka izany dia malemy fanahy? Mety angamba hahatratra ny dian'ny hatramin'ny 30 km / h, ary miaraka ny replaceable bateria entana, 2pcs Packs bateria dia afaka haharitra 60km, mandehana intsony.
Inona no fomba mahomby hamantarana iray amin'ireo tsara indrindra skateboard herinaratra ho an'ny mpitaingin, ankizy sy ny olon-dehibe? Spec iray hafa izay milaza anareo izao skateboard jiro dia mikendry ny olon-dehibe dia ny laharana Output angovo ny maotera. Izany dia elektronika skateboard izay omena amin 'ny herinaratra maotera izay ampiasain'ny lavitra. Ny mitokana no tena mora ampiasaina, na izany aza izany mivantana ny miasa. Ny mora-to-fampiasana lavitra fitantanana ny mora mamela haingana - ary na dia midika fa afaka manilika ny fomba backwards!
Post fotoana: Mar-09-2018